10 nke ebe kachasị mma na Galicia | Akụkọ Njem
Galicia bụ otu n'ime ebe ndị toro ọtụtụ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya na Spain, ọ bụkwa na ndị mmadụ amatala oke obodo a dị na ugwu nwere ike inye. Si mara mma osimiri ka paradisiacal agwaetiti, ochie obodo, azu obodo na ịtụnanya Okirikiri. Ọ bụ ya mere anyị chọrọ iji mee njem nke 10 nke ebe kachasị mma na Galicia.
Ebe ndị a so na ndị kachasị mma, ọ bụ ezie na anyị achọghị ikwu na ọ bụ naanị ha, ala a juputara na ebe iji chọpụta. Ma n'ezie ha bụ ebe pụrụ iche anyị kwesịrị ịga Ọ bụrụ na anyị ga-aga Galicia, yabụ were pensụl na mpempe akwụkwọ wee bido ịme ndepụta nke ihe dị mkpa maka mgbe ị gara ezumike.
1 Katidral nke Santiago nke Compostela
2 Isterlọ ọkụ Fisterra
3 Ubi vaịn nke Rías Baixas
4 Agwaetiti Cies
5 Osimiri Katidral
10 Ugwu nke Loiba
Katidral nke Santiago nke Compostela
Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke ihe niile Caminos de Santiago bụ Katidral nke Santiago, na agbanyeghị na anyị anaghị agagharị dị ka ndị njem ala nsọ, o doro anya na ọ bụ otu n'ime isi ihe ndị a ga-elerịrị anya mgbe anyị na-aga Galicia. Katidral nke ọdịdị ihu Baroque na-apụta na okwute na-enwe ntụpọ mgbe niile site na ihu igwe Galician. Mana ọ bụghị naanị ihe a ga-ahụ, mana anyị nwekwara ike ịgagharị iji hụ Torre de la Berenguela, ma banye n'ime iji nwee mmasị na botafumeiros ama ama na nke onyeozi ahụ.
Isterlọ ọkụ Fisterra
Ọzọ nke kasị gara ebe ke Galicia bụ Finisterre ma ọ bụ ụlọ ọkụ Fisterra, ebe ndi Rom kwere na ya bu njedebe nke uwa. Ekwuru na mgbe ha rutere na Katidral ahụ, ndị njem ala nsọ ga-agagharị n'okporo ụzọ dị kilomita iri itoolu na abụọ na Cabo Fisterra iji mee ka mkpụrụ obi ha dị ọcha ma mechaa emume ahụ. Ọtụtụ na-eme ya, ọ bụ ya mere na ọ na-eleta ọtụtụ mgbe. Mana ịhapụ emume ndị a n'akụkụ, ịhụ ọdịda anyanwụ na ebe a bụ ihe pụrụ iche, nke anyị kwesịrị ime opekata mpe otu oge na ndụ anyị, iji nwee mmetụta nke ndị Rom ahụ chere bụ ndị chere na ụwa gwụrụ ebe ahụ.
Ubi vaịn nke Rías Baixas
Rías Baixas pụtara ọtụtụ ihe, maka ala ya, osimiri ya na gastronomy ya, mana anyị ga-ekwu maka mmanya ya ndị ama ama, ọkachasị Albariño. Na Mpaghara Cambados Anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ubi vaịn, nke yiri ka enweghị njedebe, mmanya ndị gbara ya gburugburu na ndụ ọzọ bụ ụlọ obodo. Enwere ike ileta ọtụtụ n’ime ha iji hụ etu esi eme mmanya ma detụ mmanya ndị Galician a ụtọ.
Agwaetiti ndị a paradaịs na Galicia. Agwaetiti ụfọdụ enwere ike iru catamaran n'oge ọkọchị, ebe ọ bụ na n'oge oyi enwere oge mgbe enweghị ọrụ. Imefu ọ dịkarịa ala otu ụbọchị na ha bụ ihe kwesịrị, na-achọpụta oke osimiri dị egwu, yana ụlọ ọkụ dị na Cíes, nke a na-enwekwa ọdịda anyanwụ na-adọrọ adọrọ. Agbanyeghị, iji hụ ya, ị ga-ehi ụra n'ogige agwaetiti ahụ, yana oge dị elu, ị ga-ebu akwụkwọ tupu oge eruo.
Playa de las Catedrales, emi odude ke Osimiri Lugo, bụ ebe ọzọ ama ama mba niile. A osimiri nwere ọnụ ọnụ ugwu nke mmiri na ifufe si n'ụsọ oké osimiri kpụrụ, na taa nwere ọdịdị dị egwu, ya mere aha ya. Iji hụ ha n'ebube ha niile, anyị ga-echere obere mmiri, n'ihi na ọ dị elu n'akụkụ osimiri ahụ wee kpuchie ya, anyị enweghị ike ịghọta oke ugwu ndị ahụ dị egwu.
Los Cañones del Sil, emi odude ke Ribeira Sacra, Mpaghara ebe ha nwekwara mmanya ha nwere ebe a si malite ha. Ga leta ndagwurugwu ndị a bụkwa ihe ama ama maka ndị njem nleta. Nwere ike ịga njem njem catamaran site na ndagwurugwu na-enwe ọnụ ugwu na oghere ndị sitere n'okike ka ị hụ ebe obibi ndị mọnk na mpaghara ahụ ma detụ mmanya ahụ ụtọ.
Las Fragas do Eume na-bụ ogige ntụrụndụ echekwara na otu n’ime oke ọhịa Atlantic echekwara nke ọma na Europe nile. N’oge a na-eme njem dị elu n’oge, a na-ebipụ n’otu oge, ma e nwere bọs na-ebufe anyị iji buga anyị n’ebe a na-apụ, n’akụkụ ebe obibi ndị mọnk ahụ. Agbanyeghị, enwere ike iji ụkwụ na-enwe obi ụtọ maka ọdịdị ala kachasị mma, yabụ ọ bara uru ịhapụ ụgbọ ala ahụ ma nwee ọ natureụ na okike.
Pallozas ndị a bụ tupu Rom biri, na otú e si rụọ ha ka e chebere, malite n’elu ụlọ ndị ahụ akịrịka ruo n’elu ụlọ nke yiri elliptical. Obi abụọ adịghị ya na ha kwesịrị ka a hụ ha, ebe ọ bụ na ha na-agwa anyị banyere otu ha si bie ọtụtụ narị afọ gara aga na ọnọdụ ihu igwe kachasị njọ.
Combarro na-bụ obodo nta azu na Rías Baixas nke na-ewu ewu n'ihi ọdịdị ala ya. Ebe a na-ere nri n’ụlọ dị n’ụsọ oké osimiri, ụgbọ mmiri ndị ahụ na okporo ámá ndị dị warara bụ ebe anyị na-agaghị ezere ịse foto.
Ugwu nke Loiba
Ọ bụrụ na bench nwere echiche kacha mma n'ụwaWill ga-amara na ọ dị na ọnụ ọnụ ugwu Loiba, na mpaghara Ortigueira. O doro anya na ọ nwere ike ịbụ otu n'ime ebe kachasị mma iji mechaa njem nke Galicia. Nọdụ n'oche na echiche kachasị mma na ịtụgharị uche n'oké osimiri n'udo zuru oke nwere ike ịbụ njedebe kachasị mma nke njem ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » 10 nke ebe kachasị mma na Galicia